नाम जस्तै ‘सुन्दर’ काम सुन्दरको ! विद्यार्थी निशुल्क पढाउन देखि शिक्षक फि सम्म तिर्दै ! | सु-सुचित नेपालको चित्र
नाम जस्तै ‘सुन्दर’ काम सुन्दरको ! विद्यार्थी निशुल्क पढाउन देखि शिक्षक फि सम्म तिर्दै !
मोरङ उर्लाबारी—९ निवासी युवा समाजसेवी सुन्दर श्रेष्ठले गतवर्षझैँ यस वर्ष पनि १० जना विद्यार्थीलाई उपलब्ध गराएको छात्रवृत्ति बराबरको सहयोग गरेका छन् । आज सोमबार स्थानीय प्रभात आधारभूत विद्यालयमा अध्ययनरत १० जना विद्यार्थीको पठन पाठनको जिम्मा लिदैं छात्रवृत्ति उपलब्ध गराएका हुन् ।
श्रेष्ठले विद्यालयमा आयोजित कार्यक्रममा कक्षा १ देखि ८ कक्षासम्म अध्ययरत १० जना विद्यार्थीका लागि वर्षभरिका लागि आवश्यक पोशाक, कापीकलम, जुत्ता, ब्याग र विद्यालमा लाग्ने शुल्क उपलब्ध हस्तान्तरण गरे ।
उनले पठनपाठनमा मन भएका विपन्न परिवारका विद्यार्थीहरूको उज्ज्वल भविष्यका लागि आफूले सहयोग गरेको बताए । उनले गतवर्ष पनि आफूले १० जनालाई छात्रवृत्ति दिएको बताउँदैै सोही कार्यलाई यस वर्ष पनि निरन्तरता दिएको बताए । उनका अनुसार यस वर्ष केही विद्यार्थी फेरबदल चाहिँ भएका छन् ।
‘त्यसबेला घरको अवस्था दयनीय भएकाले हाम्रो पालामा पढ्ने बेलामा कहिले कापी किन्ने पैसा हुँदैन थियो, त कहिले कलम किन्ने, अहिलेजस्तो जुत्ता लगाउने, ब्याग बोक्ने कुरा त सपना जस्तै थियो । आज तिनै दिनहरू सम्झेर बाल्यकालमा भोग्नुपरेको समस्या महसुुस गरी छात्रवृत्ति उपलब्ध गराएको हुँ,’ कार्यक्रममा आफ्नो विगत सम्झँदै भने । उनले विद्यालयको दयनिय अवस्था देखेको र स्तरोउन्नतीमा टेवा पुगोस भनेर प्रभात स्कुललाई सहयोग गरिरहेको बताए ।
छात्रवृत्ति पाउनेहरूमा मिलन जिमी, विमल विश्वकर्मा, कुशल लिम्बू, भूमिका खतिवडा, सजना लिम्बू, मनीषा लिम्बू, ओसिन मारापाँचे, सुमित लिम्बू, पूर्णमाया खड्का र अनिशा राई रहेका छन् ।
श्रेष्ठले यसअघि विद्यालयमा मञ्च बनाइदिनुका साथै पर्खाल निर्माण र रंगरोगनमा समेत सहयोग गरेका गरिसकेका छन् । उक्त विद्यालयका पूर्वविद्यार्थी समेत रहेका श्रेष्ठले विद्यालयका लागि आफै तलव उपलब्ध गराएर एक जना अंग्रेजी शिक्षिका पठन पाठनका व्यवस्था गरेका छन् ।
उर्लाबारी वडा नम्बर ९ का वडा अध्यक्ष बम फ्याकको प्रमुख आतिथ्यतामा भएको कार्यक्रममा वडा सदस्य हुकमाया श्रेष्ठ,तेजेन्द्र साँवा,समाजसेवी प्रकाशचन्द्र सापाकोटा लगायतको विद्यार्थी अभिभावकको सहभागिता रहेको थियो ।
को हुन् सुन्दर ?
घरमा हातमुख जोर्न धौधौ परेपछि २०४९ सालमा किशोरअवस्थामै काठमाडौं हानिएका थिए,सुन्दर । खोपीडाँडामा जन्मेहुर्केर काठमाडौंमा ठेक्कापट्टा र हाउजिङ्ग व्यवसाय गरिरहेका श्रेष्ठले गाउँको विकासका लागि लाखौं रुपैयाँ खर्चेका हुन् । सुरुमा काठमाडौं पुगेर उनले दैनिक ४० रुपैयाँ पारिश्रमीक लिएर ज्यालामजदुरी सुरु गरेका थिए । हुन त उनको विगतले पनि उनलाई समाजसेवा तर्फ लाग्न प्रेरित गर्यो ।
परालको छाना र सण्ठीको बेरा भएको झुप्रो घरमा जन्मिएर हुर्किएका श्रेष्ठको वाल्यअवस्था आर्थिक अभावमा नै बित्यो । तीन दाजुभाई मध्ये कान्छा उनले पढाई राम्रो गर्न सकेनन् । पढाइ बिग्रिएपछि एसएलसी दिएर उनी काठमाडौं हिँडेका थिए । काठमाडौंमा गरेको कमाईले उनले पराल र सन्ठीको घर भएको ठाउँमा काठको घर हुँदै पक्की घर बनाए ।
अहिले पनि उनले आफूले काम गर्दै आएको निर्माण क्षेत्र र हाउजिङ व्यवसायबाट आएको पैसा नै गाउँको विकासमा लगानी गर्दै आएका छन् । उनको सोच भावी सन्ततीले दुःख भोग्न नपरोस भन्ने नै हो । मानिसहरु आफ्नो गाउँठाउँलाई बिर्सिदिन्छन्, सुविधा खोज्दै अन्यत्र जान्छन् । तर उर्लाबारी—९ का युवा समाजसेवी सुन्दर श्रेष्ठ त्यसका अपवाद हुन् ।सुन्दर काठमाडौंमा कडा परिश्रम गर्छन्, अनि त्यसको प्रतिफलको केही हिस्सा गाउँको विकासमा खर्चिन्छन् । हाल उनी ठेक्कापट्टा र हाउजीङ्ग व्यवसायमा सम्लग्न छन् । सुन्दर भन्छन्, म अझै आफुलाई एउटा लेबर हुँ भन्न रुचाउछु ।
गाउँको पीडामा सक्दा मल्हम पट्टी लगाउने प्रयास हो मेरो । सुन्दर भन्छन्, ‘इच्छा शक्तिका साथै सबै लागिपर्ने हो भने समृद्धी खोज्न अन्यत्र भौतारिनु पर्दैन ।’ राजधानीलाई कार्यथलो बनाएका उनले आफ्नो गाउँमै बसेर केहि गर्ने योजना बनाएको बताए । उनले भने, ‘पछि गएर गाउँमा कृषि र पशुपालन व्यवसाय गर्ने लक्ष्य छ । माछापालन, कुखुरा पालन गाउँमा सुरु गरिसकेको छु ।’
नाम जस्तै काम
श्रेष्ठले आफु जन्मे हुर्केको वडाको विद्यालय तथा गाउँलाई उल्लेखनिय सहयोग गरिरहेका छन् । यतिबेला उनी आफ्नो वडाको विद्यालयलाई भौतिक पूर्वाधार सम्पन्न विद्यालय बनाउन क्रियाशिल छन् ।
सुन्दर श्रेष्ठ यस्तो समाजसेवी हुन्,जो अरुलाई मागेर होईन, आफ्नो पसिना बगाएर कमाएको रकम गाउँको विकासमा खर्चिदैछन् । श्रेष्ठ जस्तो सहयोग गर्ने मानिसहरु समाजमा विरलै पाईन्छ,उनलाई जान्ने बुझ्नेहरु भन्छन् ।
उर्लाबारी—९ को प्रभात निमावि, राजघाट निमावि र सार्वजनिक माविमा उनले उदाहरणयोग्य सहयोग गरेका छन् । जसको कारण अभिभावकहरु र स्थानीयहरुको जनजिब्रोबाट सुन्दर श्रेष्ठको प्रशंसा भईरहेको पाईन्छ। सुन्दरले प्रभात निमाविमा आफ्नो एकल लगानीमा ट्रस सहितको स्टेज बनाइदिएका छन् । उनले घेराबारामा पनि महत्वपूर्ण सहयोग गरेका छन् । विद्यालयमा पिङ वालउद्यानका समाग्रीहरु सहयोग मात्र गर्नु भएको छैन, विद्यालयमा रंगरोगन पनि आफ्नै खर्चमा गरिदिएका छन् ।
त्यो भन्दा अझ महत्वपूर्ण कुरा विद्यालयका १० जना विद्यार्थीलाई आफ्नै खर्चमा पढाईरहेका छन् । आफ्नै लगानीमा एक जना शिक्षक राखिदिएपछि अहिले विद्यार्थीलाई अंग्रेजी शिक्षाको लागि निक्कै सहजता भएको छ । श्रेष्ठले विद्यार्थीको फि मात्र हैनन, अंग्रेजी शिक्षकको तलव पनि तिरिदिन्छन् ।
श्रेष्ठले विद्यार्थीको लागि परिचय बनाईदिदैं खेल समाग्री पनि सहयोग गरेका छन् । श्रेष्ठ आफुले सहयोग गरेको स्कुलमा पठनपाठन पनि राम्रो होस भनेर शिक्षक र विद्यार्थीलाई सुझाप दिन्छन् । भौतिक विकास मात्र भयो र पढाई खस्कियो भने त्यसको के अर्थ, जसको लागि अभिभावक र शिक्षक जोडतोडले लाग्नुपर्छ।
उनले राजघाट निमावि उर्लाबारी—९ मा पनि गेट निर्माण गरिदिएका छन् । विद्यालयमा घेराबारा भयो, तर सुरक्षित प्रवेशद्धार नहुँदा समस्या थियो, प्रअ गोपाल श्रेष्ठले भने, स्वागत गेट निर्माण गरिदिएर विद्यालयको ठुलो सुरक्षा भएको छ ।
अन्य निकायबाट आश्वसन मात्र पायौ, सुन्दर सरले एकैबचनमा काम गरिदिए,उनले भने । सुन्दर श्रेष्ठ विद्यालयमा सहयोग मात्र गर्दैनन् । काठमाडौंबाट घर आएका बेला विद्यालयमा गएर विद्यालयका समस्याहरु बुझ्ने गर्छन । विद्यार्थीलाई पढाई कस्तो छ, सर मिसले कस्तो पढाउछन् भनेर सोधुपुछ पनि गर्छन् ।शैक्षिक अवस्था सुर्धान अनुरोध गर्छन्। अभिभावकहरुसँग अन्तरक्रिया गर्छन् ।
श्रेष्ठको सहयोगमा सार्वजनिक मावि आम्बारीमा पनि पक्की स्टेज बनको छ । विद्यालयले श्रेष्ठले समस्या राखेपछि श्रेष्ठले आफ्नो सहयोगी मन फराकिलो बनाए । गाउँमा जेष्ठ नागरिकको लागि बृद्धबृद्धा चौतारी निर्माण, सडकबत्ति जडान,खेलकुद मठमन्दिर लगायतमा विविध क्षेत्रमा सहयोग गर्दै आएका श्रेष्ठ सहयोगको सहि सदुपयोग भए आफुलाई पनि खुशी लाग्ने बताउछन् ।
विकासको काम जो जस्ले गरेपनि सबैले साथ सहयोग गर्नुपर्ने श्रेष्ठ उनको भनाई छ । विकासको नाममा गरिने राजनिती श्रेष्ठलाई पटक्कै मन पर्दैन् । सामाजिक काम गर्दा आफुलाई खुट्टा तान्नेहरु निस्किएको पाएका सुन्दर आफ्नो सुन्दर यात्रामा कतिपनि विचलित छैनन् । भन्छन,बरु उनीहरुलाई त धन्यवाद दिन चाहान्छु, झन समाजमा राम्रो काम गरेर देखाउने अठोट बढ्ने रैछ ।
बसाई काठमाडौं, मन गाउँमै
अलिकति कमयो,जमायो भने धेरै जसो मानिसहरु आफ्नो गाउँ ठाउँ नै बिर्षिन्छन्,बसाई छोडेर सुविधा खोज्दै अन्यत्र जान्छन् । तर श्रेष्ठ त्यसमा अपवाद भित्र पर्छन्, जो जहाँ रहेपनि गाउँकै यादमा अनि विकासमा चिन्तित हुन्छन् । काठमाडौं टिकाथली बस्दै आएका सुन्दर काठमाडौंमा कडा परिश्रम गर्छन्,अनि परिश्रमको केहि प्रतिफल आफ्नो गाउँको विकासमा खर्चिन्छन् । आफ्नो जन्मथलो आउजाउ गरिरहन्छन् । शहरकै जस्तै गाउँमा ठुलो पक्की घर बनाएका छन् ।
गाउँमा सडक बत्ति जडान र विद्यालयहरुमा सहयोग गर्दै आएका सुन्दर एउटा गीत सम्झदैं भन्छन्, जति भुलु शहरको रमझममा,मन त आखिर आफ्नै गाउँमै हुन्छ । सुन्दर काठमाडौंमा भएपनि उनलाई गाउँको विकास निर्माण,खेलकुद तथा विविध काममा सहयोगको लागि फोन आउछ ।
गाउँको विकास निर्माणमा सक्रिय सुन्दर गाउँ आउदा सामाजिक काममा ब्यस्त रहन्छन् । पहिल्यै निक्कै संघर्ष गरेर स्थापित भएका सुन्दर धन भएर भन्दा पनि मन भएर सहयोग गरेको बताउछन् । राजधानिलाई संघर्षभुमी बनाएका सुन्दरले आफ्नो गाउँमै बसेर केहि गर्ने योजनाहरु बनाएको बताए ।
विकास गर्न जनप्रतिनिधि नै हुनु पर्दो रहेछ र ?
सुन्दर श्रेष्ठ, यस्तै व्यक्तिमा पर्छन, जसको काम नामजस्तै सुन्दर छ । गाउँको स्तरोउन्नतिका लागि उनी आफ्नो नीजि खर्चमा नै समाजसेवामा तल्लिन छन् । कहिले सडक बत्ति जडान त कहिले विद्यालयमा सहयोग, खेलकुद र बाटोघाटोको निर्माणमा उनको योगदान रहँदै आएको छ ।
विद्यालय, गाउँका सडक बत्तीमा उनले सहयोग गरेका छन् । आफ्नै लगानीमा बाटो, खेलकुद तथा कला संस्कृतिका क्षेत्रमा पनि उनको सहयोग छ । सकारात्मक सोचका साथ सहयोगी हात लिएर अएकालाई उनले रित्तो हात फर्काउँदैनन् ।